The Horus Heresy: Legions – TCG card battle game 1.5.8 အန္းဒ႐ိုက္ APK ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ | Aptoide
7.5K 69.5 MB 3.43
The Horus Heresy: Legions – TCG card battle game ၏ ရွင္းလင္းခ်က္
ဒါဟာအဆိုပါ Horus ယူဖောက်ပြန်အတွက်အာကာသအဏ္ဏဝါနှိုင်းယှဉ် Space ကိုမရိန်းင်: သင်၏လုပ်ရပ်များနှင့်ကဒ်တိုက်ပွဲဂိမ်းကိုပြောင်းလဲဘယ်မှာ Legion အသစ်တစ်ခုနည်းဗျူဟာကဒ်ဂိမ်း (TCG) ။
, သင့်ကို Legion of Honour Choose ကတ်များစုဆောင်းနှင့်နဂါးငွေ့တန်းအုပ်ချုပ်ဖို့ Mechanicum, Imperial ကြည်းတပ်သို့မဟုတ် Chaos အားဖြင့်ကူညီခဲ့ Space ကိုမရိန်းတပ်သားတစ်ကုန်းပတ်ကိုတည်ဆောက်စေ။ တစ်ဦး Guild join, ကဒ်မဟာဗျူဟာနှင့်ကုန်းပတ်ဆွေးနွေးရန်နှင့် PvP Arena ကဒ်တိုက်ပွဲများအတွက်စစ်တိုက်ခြင်း။ ဂိမ်းထည့်သွင်းထားပါသည်အသစ်သောအရာကတ်များ, အလှကုန်နှင့် Legion သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့မော်ကွန်းအဖွဲ့ခွဲစစ်ပွဲများအတွက်ခြမ်းကိုရွေးပါ။ အွန်လိုင်းမှ TCG ကကဒ်ဂိမ်းအဖြစ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, အဆိုပါ Horus ယူမှား, ဂိမ်းများအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအားဖြင့် Warhammer 40,000 စကြဝဠာမှာအချမ်းသာဆုံး setting များကိုတစ်ဦးထည့်သွင်းပါ။
အိုင်တီ 31 ထောင်စုနှစ်ရဲ့: Warhammer 40,000 များ၏မော်ကွန်းဇစ်မြစ်ဖှငျ့။ သစ္စာဖောက် Legion ဧကရာဇ်စစ်တိုက်။ တစ်ခုမော်ကွန်းတစ်ကိုယ်တော်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး Play, Warhammer 40,000 သမိုင်းမှာအများဆုံးဝမ်းနည်းဖွယ်ပြည်တွင်းစစ်မှတဆင့် PvP နှင့် multiplayer PvP Arena နေရာတွင်ရှိသည်။
စစ်ကို AT TCG က Legion: အ Warhammer 40,000 lore ထံမှအသစ်သောအာကာသအဏ္ဏဝါ Legion အဖြစ်သင့်ကဒ်စုဆောင်းခြင်း Expand တစ်မူထူးခြားတဲ့ကဒ်စာရင်းနှင့်မဟာဗျူဟာနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကဆက်ပြောသည်နေကြသည်။ စစ်မြေပြင်ကဒီမဟာဗျူဟာကိုကဒ်ဂိမ်းအတွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့စောင့်ရှောက်!
စစျမှနျသောကဒ် Battle လမျး: မော်ကွန်းအဆင့် PvP နှင့်တံဆိပျကိုအလှဆင် Arena အတွက်တိုက်ပွဲ။ သင့်ရဲ့ကဒ်စုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်မာစတာထံမှသင်တို့သေးပိုင်ဆိုင်ကြဘူးကတ်များကို အသုံးပြု. အသီးအသီး Arena ချိတ်ပိတ်အလှဆင်နေတဲ့ကုန်းပတ် Build ။
Guilds Wars: ဤ TCG ကမဟာဗျူဟာကဒ်ဂိမ်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြောင်းမော်ကွန်း PvP Arena ကဒ်တိုက်ပွဲများ၌သင်တို့၏ Guild နှင့်အတူ Coordinate ။ ကဒ်မဟာဗျူဟာဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဖော်ရွေကဒ် duels ၌သင်တို့၏ကုန်းပတ်စမ်းပါ။ အခြားအ Guilds တိုက်ဖျက်နှင့်သင့်ကဒ်စုဆောင်းခြင်းကြီးထွား!
လူမှုဆက်သွယ်ရေး: Twitter နဲ့ Facebook နှင့်စိတ်တိုးပွားအပေါ်အခြားကစားသမားကို Join ။ ဒီမော်ကွန်း TCG အတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးကို Legion of Honour မဟာဗျူဟာ, ကုန်းပတ်နှင့်အကြိုက်ဆုံးကတ်များနှင့် ပတ်သက်. chat ။
ယခုအွန်လိုင်းမှ TCG ကမဟာဗျူဟာကဒ်ဂိမ်းအဖြစ် Warhammer 40,000 ၏မူလ!
အဆိုပါ Horus ယူဖောက်ပြန်: Legion ©မူပိုင်အားကစားပြိုင်ပွဲအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလီမိတက် 2018. အဆိုပါ Horus ယူဖောက်ပြန်: Legion, အ Legion လိုဂိုက The Horus ယူမှား, အဆိုပါ Horus ယူဖောက်ပြန်မျက်လုံးလိုဂို, GW, ဂိမ်းများအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, အာကာသရိန်း, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, ကို 'အာကုလ '' ကို Double-ခေါင်းနှစ်လုံးလင်းယုန်လိုဂို, Black ကစာကြည့်တိုက်, Forge ရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဆက်စပ်အမှတ်တံဆိပ်များ, သရုပ်ဖော်ပုံများ, ပုံများ, နာမည်, သတ္တဝါတွေ, လူမျိုး, မော်တော်ယာဉ်, တည်နေရာ, လက်နက်, ဇာတ်ကောင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောသဏ္ဍာန်, တစ်ခုခုဖြစ်ကြသည်®သို့မဟုတ် TM နှင့် / သို့မဟုတ်©အားကစားပြိုင်ပွဲအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလီမိတက်, variable ကမ္ဘာတဝှမ်းမှတ်ပုံတင်နှင့်လိုင်စင်အောက်တွင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံးအခွင့်အရေးကိုသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များမှ reserved ။
The Horus Heresy: Legions – TCG card battle game ကဲ့သို႔ေသာ အက္ပ္မ်ား
APK သတင္းအခ်က္အလက္ - The Horus Heresy: Legions – TCG card battle game